I-china Taper Roller Bearing Metric series abakhiqizi nabaphakeli | I-LGGB
I-Taper roller bearing ngokuvamile isetshenziselwa ukuxhasa umthwalo ohlanganisiwe ikakhulukazi oqukethe umthwalo osabalalayo. Izinkomishi zabo ziyahlukaniswa ukuhlangana kalula. Ngesikhathi sokufaka nokusebenzisa, ukuvulwa kwe-radial kanye ne-axial clearance kungashintshwa futhi ukufakwa okulayishwe ngaphambili kungenziwa.
Ukuthwala ama-Taper roller kuklanywe ngokukhethekile ukuphatha kokubili imithwalo yemithwalo kanye ne-radial kuma-shafts ajikelezayo nasezindlini.
Ukuthwala ama-Taper roller kwenzelwe ukuthwala imithwalo ye-thrust kanye ne-radial futhi iqukethe izinto ezine: isigaxa, noma iringi yangaphakathi; inkomishi, noma indandatho engaphandle; ama-roller tapered, noma izinto ezigingqikayo; kanye nekheji, noma i-roller retainer.
I-Taper roller bearing ikakhulukazi ithwala i-radial, i-axial umthwalo ohlanganisiwe nomthwalo osabalalayo main. Umthamo wokuthwala umthwalo we-axial uncike engxenyeni yokuxhumana yomgwaqo weringi wangaphandle. Lapho i-engeli yokuxhumana ikhudlwana, umthamo uzokuba mkhulu.
I-Taper roller ethwele i-engeli phakathi kwe-raceway genatrix yangaphandle nomugqa, ukuthwala kungathwala umthwalo osindayo namanye ama-Tappered Roller Bearings, ikakhulukazi kuthwala umthwalo ohlangene ngokuya ngandlela-thile ye-axial load, kepha hhayi umthwalo osabalalayo kuphela.
Amabheringi ama-Taper roller anemigwaqo yangaphakathi neyangaphandle yendandatho, I-roller tapered iphakathi kwemigwaqo emibili. Lolu hlobo lwamabheringi luvame ukuhlukaniswa, okungukuthi isamba, iringi yangaphakathi nendandatho yangaphandle ingafakwa ngokuhlukana. Bangakwazi ukumelana nomthwalo omkhulu wokuqondisa osabalalayo nomthwalo othile we-axial. Zenzelwe ngosayizi nezitayela ezahlukahlukene ukuhlangabezana nazo zonke izinhlobo zemisebenzi.
d UD T B C umzuzu r1min Cr Kor r / iminithi r / iminithi
Langaphambilini Uchungechunge lwe-Taper Roller Bearing Inch
Olandelayo: Ibhola elijulile le-groove eliqukethe uchungechunge lwe-16000